JINGHPAW KASA: ခဆန့် နှင့် ဂေါ်ရီကျေးရွာကြား ဗမာစစ်သား (၂) ဦးကျ
နိုင်ဝင်ဘာ (၁၇) စနေ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အေအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - ကားမိုင်းလမ်း ခဆန့်ကျေးရွာနှင့် ဂေါ်ရီကျေးရွာကြားတွင် နိုင်ဝင်ဘာ (၁၆) ရက် နေ့လည်း (၁း၃၀) နာရီခန့်တွင် ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၆) မှမျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရ စစ်ကြောင်းများက ဆီးကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ တိုက်ခိုက်ရာ ဗမာအစိုးရ စစ်သား (၂) ဦးသေဆုံးပြီး၊ (၁) ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကားမိုင်းမြို့တွင် ဗမာအစိုးရ စစ်ကား (၃၇) စီးရောက်ရှိနေပြီး၊ ဖားကန့်ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်ရန်ရောက်ရှိနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်နက်ကြီးများတင်ဆောင်ထားသော စစ်ကား (၅) ခန့်လည်း ပါဝင်ကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။
(2) Burmese soldiers were killed and (1) was injured in Hka San Yang and Gauri villages, it is between Mogawng and Kamaing road, which in under KIA (2nd) Brigade area, western Kachin State, on 16th November according to the KIA front-line officer. At 01:30 on that day, KIA (6th) battalion soldiers waited and opened fire the huge Burmese invader troops in Hka San yang and Gauri villages. And there were 37 Burmese war Lorries arrived in Kamaing and they aimed to operate in Hpa Kant area, moreover (5) Lorries carried heavy artillery weapons.
လက်နက်ကြီးတွေရောက်ပြန်ပြီဆိုရင်တော့ ထပ်သေကြအုံးမှာပဲ 12.11.2012 နေ့ ညနေပိုင်းကလဲ kia စခန်းကို အစိုးရဗျူဟာက လက်နက်ကြီး ခြောက်လုံး လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ အကုန်လုံးမီးလောက်ပြာ ကျ ပြောင်ရှင်းသွားတာပဲ
သတင်းကလဲကွာ ဗမာအစိုးရစစ်သားသေတာတွေပဲ ကြေညာနေတယ် kia စခန်း တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု အသိမ်းခံနေရတာတော့ ဘာလို့မကြေညာတာလဲ ငါတို့နားမှာတော့ အလောင်းတွေတောင်ကောက်ချိန်မရလို့ အရပ်ကမြှုပ်ပေး တာကတစ်ချို့ ဒီအတိုင်းပုတ်တာတွေက ပုတ်နဲ့ နံဆော်နေတာပဲ
KIA, ကြောက်စရာမလိုဘူး ဘုရားတကာထက်ဘုရား ဘုရင်တကာထက်ဘုရင် ဖြစ်တဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ထဝရဘုရား ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုမမေ့နဲ့ ဘုရားသခင်က ရုပ်ထု ကြီလည်းမဟုတ်ဘူး နာရှိပြီးမကြား မျက်စိရှိပြီမတွေ့တဲ့ ရုပ်ထုကြီးမဟုတ်ဘူး ဆို တာသိကြပါ KIA ရဲ့ ရှေ့ဆုံးမှာ အသက်ရှင်တော်မူတော်ဘုရားရဲ့ သန့်ရှင်သောဝိ ညာဉ်တော် ကောင်းကင်သမန်တော်သည်က တိုက်ပေးနေတာ ဒါကြောင့် KIA နောက်တန်းဘက် အထူးဆုတောင်းပေးနေတယ် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းနေတယ် ကြောက်စရာ မလိုဘူးဘုရားကိုအားကိုး ဆုတောင်းပြီးမှ တိုက်ပါ သင်သေနတ် ကြည်ဆံ မထွက်ခင် ရန်သူကအရင်ရှုံးနေပြီ ဟာလေလုယာ ချီမွမ်းလိုက်ပါနော်။
KIA တို့ဆုတောင်းအားယူ၍ရဲရင့်ခြင်းရှိကြလော့ သင်တို့အနားမှာလူ သိန်းသန်းလှဲ သော်လည်း သက်မလှဲစေရ ဆိုပြီးဘုရားမိန့်မှာထားပါတယ် KIA မျိုးချစ်ရဲဘော်တို့ ဟောလွန်လေပြီးသောကာလများစွာက ပြစ်မှားခဲ့သော အပြစ်များကို ရှိခဲ့လျှင်သတိရပြီး ဘုရားထံဝန်ခြတောင်းပန်ပါ ကိုယ်ကအပြစ်ရှိလျှင် အပြစ်ရဲ့ဒဏ်ကို ခံရတတ်ပါတယ် သက်သာနောင်တ ရရင်ဘုရားကကြိုဆိုပြီးသင့်ကို ခွင့်လွတ်ပြီး သက့်ရဲ့ အကြံ စည်အလုံးစုံကို အောင်မြင်ခြင်းသရဖူကို ဆောင်းပေးလိမ့်မယ်